Pokémon Go yave kuwanikwa yeApple Watch | Ndinobva mac
Pokémon Go yave kuwanikwa yeApple Watch
Pakutanga svondo rino takakuzivisa nezve kunonoka kwaive nako mukuvhurwa kweshanduro yeApple Watch yePokémon GO, mutambo wakagadzira mari zhinji yevakomana veCupertino uyezve nevagadziri mumakore apfuura. Iyo Pokémon GO kunyorera kweIOS ichangogamuchira iyo nyowani nyowani matinogona kuverenga kuti sei pakupedzisira inoenderana neApple Watch, chiyeuchidzo icho vashandisi vanga vakamirira kubvira Apple payakazivisa iyi sarudzo mune yekupedzisira kiyi hurukuro munaGunyana 7, mairi yakaratidza iyo nyowani iPhone 7 uye 7 Plus.
Neraki kune vashandisi vemutambo uyu, tinogona kare shandisa yedu Apple Watch kutsvaga Pokémon tisingazive nezve yedu iPhone nguva dzese Uye izvo nenzira ichatibvumidza isu kusevha imwe bhatiri isu tichivhima mhuka idzi, kudziidza neimwe nzira. Kuti tikwanise kunakidzwa nayo kubva kuApple Watch isu tinongofanirwa kugadzirisa mashandisiro pane yedu iPhone, kuitira kuti kana yakambotorwa uye kuisirwa inozoendeswa kuApple Watch. Maitiro aya anogona kutora maminetsi mashoma, saka usaore moyo.
Kana tangomhanyisa kunyorera, tinofanirwa kumisikidza zviyeuchidzo kana tichida kuziviswa kana tiri padyo neKeémon kana PokéStop. Imwe yemabhenefiti yatinopihwa neshanduro iyi ndeyekuti hazvidi kuti ushandise iyo iPhone kutanga kuvhima Pokémon, sezvo tichigona kuzviita zvakananga kubva kuApple Watch. Nenzira, panguva yedu yekutsvaga Pokémons, iko kunyorera Ichakurumidza kutizivisa nezve nguva yekuvhima, makiromita atafamba uye macalorie isu tatsva panguva yemutambo.
Zvinotaridza kuti Apple haina kufara kwazvo neiyo tweet umo Niantic yakazivisa kunonoka mukutanga kwechirongwa ichi uye akavamhanyisa kuitira kuti pasati pazororo, izvi zvakagadzirirwa, kusangana nenguva dzakatarwa neApple mune yakakosha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Pokémon Go yave kuwanikwa yeApple Watch
Tora mukana we "12starapps" yekutengesa kweKisimusi
Tsvaga iyo nyowani iCloud Photo Library, yava kuwanikwa pawebhu